Banka Aduunka oo malaayin Dollar ugu deeqay Soomaaliya | Somsoon
Home WARAR Banka Aduunka oo malaayin Dollar ugu deeqay Soomaaliya
Banka Aduunka oo malaayin Dollar ugu deeqay Soomaaliya
Shirka looga hadlayay arimaha dhaqaalaha oo uu soo qaban qaabisay Bangiga Aduunka oo ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in Bangiga Aduunka uu lacag dhan 65 milyan oo dollar ugu deeqay Soomaaliya.
Soomaaliya waxaa shirkaas ku matalayay Wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Warfaa, waxuuna sheegay lacagta uu Banka Aduunka ugu deeqayo Soomaaliya loogu tala galay in lagu caawiyo dadka ku dhibaateysan gudaha dalka, isagoo xusay in dowladda Soomaaliya lagu tijaabinayo sida ay u maamusho lacagtaas.
Wasiir Sadiiq waxa uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo in Soomaaliya la siiyo lacagta loo balan qaaday.
Dalal iyo hey’ado caalami ah ayaa horay Soomaaliya ugu caawiyay malaayiin dollar, kuwaas oo loo is ticmaalay arimo iskugu jira dib u dhiska dalka, gargaar, caafimaad, waxbarasho iyo baahiyo kale, waxaana wali muuqata baahi ay qabto bulshadu.
Article horeCiidanka dowladda federaalka oo la wareegay degmada Gurceel
Article socoda Sir-doonka Kenya oo soo bandhigay goobaha ay Al-Shabaab ku sameeyaan qaraxyada